Brandwatch Social Media nlekota oru | Martech Zone
Friday, December 14, 2012 Friday, December 14, 2012 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa na-emehie oge ụfọdụ n'iji ngwaọrụ dịka Alerts Google iji lelee akara ha. Nsogbu di Alerts Google bụ na ọtụtụ ọdịnaya dị na mgbasa ozi mmekọrịta anaghị amata, edepụtara ma chọta ka ọ na-eme. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịza arịrịọ ozugbo. E nwere a nnọọ elu puru na ị na-efu efu mkparịta ụka na-eme ma ọ bụrụ na ị na-adịghị tinye n'ọrụ a ezigbo oge na-elekọta mmadụ media nlekota ngwá ọrụ.
Akpụkpọ ụkwụ depụtara ọtụtụ ihe ndị ọzọ mere ụlọ ọrụ ji etinye ego na Social Media Monitoring solution:
Iji nyochaa aha gị, na ndị asọmpi gị.
Iji zaa mkpesa ndị ahịa na ajụjụ na Weebụ
Iji kpokọta aro ndị ahịa ma nyere aka na mmepe ngwaahịa gị
Iji kwado obodo gị n'ịntanetị
Iji gbochie ma mebie mkpuchi na-adịghị mma
Iji kwalite ngwaahịa gị ka mma
Maka nyocha ahịa
Ọkaibe ngwaọrụ dị ka Brandwatch na-enwe ike iyo, ịkọwapụta ma jide njigide isi n'ime ezigbo oge mkparịta ụka na-eme na mgbasa ozi mmekọrịta. Nke a bụ nkọwa nke usoro ọkaibe ha tinye maka iji hụ na nyocha gị na ịkọ akụkọ data bara uru ma zie ezi:
Tags: iche ichejụọ ajụjụ mgbasa oziechiche nyochamgbasa ozi mgbasa ozinlekota oru mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi